Top 5 Free Photo-edezi Software maka Mac User dezie Photos
> Resource> Free> The Best 5 Free Mac Photo Editors maka Photo-edezi na Mac
Nwere ike ị chọrọ ịmepụta na dezie gị ihe oyiyi ma ha adịghị achọ iji kwụọ ụgwọ maka ego ọ bụla. N'ezie, e nwere ọtụtụ free Mac foto editọ nyere ma ịhụ ụfọdụ n'ezie ezi ndị nwere ike ịbụ ike. Lee, anyị depụta n'elu 5 free foto edezi software maka Mac maka na olileanya ị pụrụ ịnụ ụtọ Mac foto edezi na ha. Mee ka a tụnyere na-ahọrọ onye na-amasị dị ka gị foto edezi mkpa.
Free foto edezi software maka Mac 1: The GIMP maka Mac OS X
GIMP bụ a na-ewu ewu na-emeghe-isi iyi image nchịkọta akụkọ nke Mac OS X na a na-ewere dị ka "free Photoshop" n'ihi na nke yiri interface na atụmatụ na Photoshop. Ọ bụ a beta software mepụtara ọrụ afọ ofufo, otú software mmelite ma kwụsie ike nwere ike ịbụ a nsogbu. Ma ọtụtụ ndị ọrụ na-egosipụta na software abịa na-enweghị nnukwu nsogbu na ha na-enweta iji ya. Biko mara na GIMP bụ dakọtara na Mac OS X ma ọ bụ mgbe e mesịrị.
Free foto edezi software maka Mac 2: n'ụsọ oké osimiri
N'ụsọ oké osimiri bụ na-emeghe isi foto nchịkọta akụkọ maka koko na dabeere gburugburu GIMP si technology. Ọ na-eji otu faịlụ Ọkpụkpọ dị ka GIMP, ma e mepụtara ka a Mac OS X ngwa. Mmepụta kwuru na ọ atụmatụ gradients, textures na mgbochi aliase ederede na ahịhịa ọrịa strok. E wezụga na, ọ na-akwado multiple n'ígwé na Alfa ọwa edezi.
Free foto edezi software maka Mac 3: Chocoflop
Chocoflop bụ ihe ọzọ na oké free foto nchịkọta akụkọ maka Mac. Ọ bụ free kama ọ bụ ka n'okpuru development. The oké atụmatụ nke a free Mac foto nchịkọta akụkọ bụ na ọ pụrụ abụghị na-ebibi, ọgaranya ederede, isi image nzacha, raw nkwado, wdg mgbe edit photos. Maka ndị na-adịghị eme foto edezi, ọ pụrụ ịbụ ihe siri ike iji. Na ọ bụ ihe nwute na ya ugbu a anaghị akwado Snow agụ owuru.
Free foto edezi software maka Mac 4: Pixen
Pixen bụ a free ndịna-emeputa nchịkọta akụkọ nke Mac OS X na dị nnọọ mma maka na-aga aga na pixel dabeere edezi. Ya atụmatụ na-agụnye n'ígwé ike, aha ele ihe anya, na-aga aga atụmatụ, wdg
Free foto edezi software maka Mac 5: Picasa
Picasa eje ozi dị ka ndị zuru okè foto nchịkọta akụkọ, foto onyenlereanya, foto faili na foto nkekọrịta ngwá ọrụ. Ọ na-enyere gị iji kpochapụ scratches & blemishes, idozi red-anya, akuku na ndị ọzọ, na-echigharịkwuru photos n'ime fim, collages, slideshows na ndị ọzọ. Mgbe ahụ, ị ​​nwere ike bulite gị retouched foto Picasa Web Albums ịkọrọ ha na ndị ezinụlọ na ndị enyi.
Site n'ụzọ, ọ bụrụ na ị nwere nnọọ ọtụtụ photos, ị pụrụ ime ka foto ngosi mmịfe na foto ngosi mmịfe software na ọkụ ngosi mmịfe ka DVD n'ihi na ogologo oge ichebe. Jiri nkiri ekwekọghị na-atụgharị foto gị na-Hollywood dị ka fim kama! Ma ọ bụ i nwere ike ime ka a dijitalụ scrapbook na scrapbook software na-eme ka a na ebe nchekwa akwụkwọ.